अस्वस्थ पृथ्वी, रोगी मान्छे- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कोभिड–१९ जस्ता दोहोरिरहने महाव्याधिहरुले ल्याउने संकटबाट मुक्त हुने एउटा उपाय प्रकृतिप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणमा फेरबदल हो ।
चैत्र १०, २०७६ उत्तमबाबु श्रेष्ठ
काठमाडौँ — १४ डिसेम्बर १९२९, क्रिसमसको दस दिनअघि । अमेरिकाको मेरिल्यान्ड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सिमोन मार्टिनले आफ्नी पत्नी लिलियन मार्टिनलाई सुगा उपहार दिए । दुर्भाग्यवश, क्रिसमसकै दिन उक्त सुगा रोगले मर्‍यो ।
लगत्तै श्रीमती र छोरीज्वाइँ बिरामी परे । उनीहरु चिकित्सकलाई भेट्न पुगे । चिकित्सक मार्टिन परिवारलाई लागेको अनौठो रोगबारे जानकार थिए । उनीहरुलाई सुगाबाट मानिसमा सर्ने सरुवा रोग सुगाज्वार अर्थात् सिटाकोसिस लागेको थियो । उक्त घटनापछि वासिङ्टन पोस्टले ‘सुगाज्वारले डाक्टर अचम्मित’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो । त्यसपछि मार्टिनले सुगा किनेको पसलका कर्मचारी, उनीहरुलाई जाँच्ने चिकित्सक एकपछि अर्को गर्दै बिरामी परे ।
तीमध्ये केही मरे । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरु उक्त रोगले तरंगित बने । महिनादिनपछि सुगाज्वार अमेरिकाको राष्ट्रिय संकटमा परिणत भयो । उक्त रोगबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय सरसफाइ प्रयोगशालाका वैज्ञानिक चार्ल्स आम्स्ट्रङलाई समेत उक्त रोगले समात्यो । मर्ने वा बाँच्ने दोसाँधमा पुगेका उनले एउटा असामान्य निर्णय गरे ।
उक्त रोग लागेर निको भएका बिरामीको रगत झिकेर आफ्नो शरीरमा चढाए । उनी बाँचे, तर प्रयोगशाला संक्रमित भएकाले सबै कुरा नष्ट गरियो । प्रयोगशालामा ताला लाग्यो । त्यसको दुई महिनापछि उक्त प्रयोगशालाले थप अनुसन्धानका लागि दाम मात्रै पाएन, नयाँ नाम पनि पायो— नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ अर्थात् एनआईएच । गत वर्ष एनआईएचको वार्षिक अनुसन्धान बजेट २६ बिलियन डलरभन्दा बढी थियो ।
१ डिसेम्बर २०१९, चीनको वुहान सहर । सर्प, चरा, चमेरा, लोखर्के, खरायो लगायतका वन्यजन्तुको मासु वा जिउँदो बेचबिखन हुने बजारमा काम गर्ने कामदारहरुमा निमोनिया जस्तो अज्ञात रोग देखा पर्‍यो । रुघाखोकी लाग्ने, उच्च ज्वरो आउने, श्वास–प्रश्वासमा समस्या हुने संक्रमितहरु एक्कासि बढ्न थाले । तीमध्ये केही मरे । पाँच हप्तापछि जनवरी ७ मा उक्त अज्ञात रोगको पहिचान गरियो— कोभिड–१९ । यो लेख तयार पार्दासम्म उक्त रोगबाट साढे ३ लाखजति मानिस संक्रमित भएका छन्, तीमध्ये करिब १५ हजारको मृत्यु भइसकेको छ । १९२ देशमा फैलिसकेको कोभिड–१९ को घातांकीय फैलावट जारी छ ।
९० वर्षअघि अमेरिकाको राष्ट्रिय संकट बनेको सुगाज्वार र अहिले विश्वकै महाव्याधि कोभिड–१९ मा थुप्रै भिन्नता छन् । संक्रमण भएका व्यक्तिको मृत्युको अनुपात, रोगको फैलावट, रोगको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असर मात्रै होइन, रोगको कारक पनि फरक छन् । सुगाज्वारको कारक क्लाइमेडिया सिटाकी नामक ब्याक्टेरिया थियो भने कोभिड–१९ को कारक सार्स कोभ–२ नामक कोरोना परिवारको भाइरस । तथापि सुगाज्वार र कोभिड–१९ बीचमा एउटा ठूलो समानता छ— दुवै रोगको उत्पत्तिस्रोत वन्यजन्तु हुन् । सुगाबाट मानिसमा सुगाज्वार सरे जस्तै कोभिड–१९ सम्भवतः चमेराबाट सालक हुँदै मानिसमा सरेको हुन सक्ने पछिल्ला वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
महाव्याधिका कारक : अस्वस्थ प्रकृति
सुगाज्वर र कोभिड–१९ मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा संसारमा देखा परेका महामारीहरु एचआईभी/एड्स, इबोला, एचवानएनवान, सार्स, मेर्स र जिका रोगहरुसम्म सबैको उत्पत्तिस्रोत विभिन्न वन्यजन्तु नै थिए । कुनै बेला विश्वमै सनसनी मच्चाएको एड्स वन्यजन्तुको सिकारका क्रममा चिम्पान्जीसँगको मानिसको संसर्गबाट मानिसमा सरेको थियो भने, इबोला, मेर्स र सार्स जस्ता रोगहरु वन्यजन्तुको मासु बजारबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ ।
एउटा प्रतिवेदन अनुसार, जनावरबाट मान्छेमा सर्ने सरुवा रोगका कारण संसारमा वर्षेनि १० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । ‘प्लस वान’ जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार, सन् १९८० देखि २०१३ सम्म विश्वमा २१५ वटा महामारी फैलिएका थिए, जसले विश्वभरका साढे ४ करोड मानिसलाई संक्रमित बनाएको थियो । तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोगहरुको उत्पत्तिस्रोत जनावर थिए र जसमध्ये दुईतिहाइ रोगहरु जंगली जनावरमा पाइने ब्याक्टेरिया, भाइरस लगायतका जीवाणुका कारण मानिसमा सरेका थिए । मानिसका अनौठा सोख र उपभोगका कारण वन्यजन्तुसँग मानिसको बढ्दो हिमचिम र वनविनाश लगायतका वन्यजन्तुको वासस्थानमा आएको ह्रासका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुबाट मानिसमा रोग सर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।
गत वर्ष प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन — जसमा मैले सहलेखन गरेको थिएँ — का अनुसार, मानिसको दोहनका कारण यतिखेर पृथ्वी ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ५० वर्षयता पृथ्वीको फोक्सो मानिने उष्ण प्रदेशीय वनको विनाश बढेको छ । मृगौला मानिने सिमसार सखाप भएको छ । हजारौं वन्यजन्तु लोप र लाखौं लोपोन्मुख भएका छन् । प्लास्टिक लगायतको प्रदूषण बढेको छ । जलवायु परिवर्तन र मिचाहा प्रजातिका जीवजन्तुको बढोत्तरी भएको छ । मानवदोहनका कारण प्रकृतिले मानिसलाई दिने १८ वटा प्रमुख योगदानमध्ये १४ वटामा व्यापक कमी आएको छ । समग्रमा मान्छेका कारण पृथ्वी अस्वस्थ बनेको छ । त्यही कारण प्रकृतिले महामारीसँग प्रतिरोध गर्ने, पानी र हावालाई शुद्ध बनाउने, विपत्तिसँग लड्ने जस्ता प्राकृतिक क्षमता गुमाउँदै छ ।
मानिसको सोखका कारण विश्वभर वन्यजन्तुको वैध–अवैध व्यापार फस्टाउँदो छ । यतिखेर मानिसले हजारौं वर्षयता पाल्दै आएका घरपालुवा जनावरहरुको संख्या ठूलो मात्रामा बढेको मात्रै होइन, नयाँ जनावरहरु मान्छेका आहारा वा पाल्तु बनेका छन्, जसका बारेमा हामीलाई निकै कम जानकारी छ । उदाहरणका लागि, कुकुर मानिससँगै बसेको ४० हजार वर्षभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । लामो आत्मीय सम्बन्धका कारण मानिस र कुकुर दुवैका अनुवंशमा समेत फेरबदल (को–इभल्भ्ड) भएका छन् ।
तर नेपालबाट तस्करीसमेत हुने कोभिड–१९ को सम्भाव्य कारक मानिएको सालकसँग मानिसको सम्बन्ध नयाँ हो । सालक, चमेरा जस्ता जनावर पाल्न योग्य हुन् या होइनन्, त्यस्ता जनावरसँगको सामीप्यले मानिस वा जनावरलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने जानकारी अझै छैन । वुहानका मासुपसलहरुको अवस्था हेर्दा मानिसहरु त्यस्ता अनजान जंगली जनावरहरुसँगै बसेका देखिन्छन्, जसको परिमाणबारे उनीहरु अनभिज्ञ छन् । वुहानमा जस्तो मानिस र वन्यजन्तुको निकटता अन्यत्र विरलै पाइन्छ ।
एकातिर मानिसहरु सोखका कारण आफूले कम बुझेका जंगली जनावरको समीपमा पुगेका छन् भने, अर्कातिर वनविनाश र अतिक्रमणका कारण जंगली जनावरहरु मानवबस्तीमा पसेका छन् । मानव इतिहासमै यसअघि कहिल्यै नदेखिएको मानव र वन्यजन्तुको यस्तो सामीप्य जीवजन्तुबाट मान्छेमा रोग सर्ने सेतु बनेको छ ।
संसारमा भूमध्यरेखा वरपरका उष्ण प्रदेशमा अन्यत्रभन्दा ज्यादा र पृथक् प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पति पाइन्छन् । भूमध्यरेखाबाट जति बढी उत्तर वा दक्षिणतिर गइन्छ, त्यति नै प्रजातिको संख्या घट्दै जान्छ । त्यसो त भूमध्यरेखा वरपरका उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र मानिसलाई रोग लगाउने जीवाणुहरुको पनि खानी हो । त्यसैले वैज्ञानिकहरु भन्छन्— जसरी भकारी फोर्दा त्यहाँबाट थुप्रै कीराहरु निस्कन्छन्, त्यसरी नै उष्ण प्रदेशीय जंगल विनाश गर्दा त्यहाँ भएका जीवाणुहरु निस्कन्छन् । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार, जिका, इबोला लगायतको महामारीको सीधा सम्बन्ध वनविनाशसँग छ । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले यस्तो महामारीलाई थप सघाएको छ । जस्तै— जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका उच्च पहाडी भेगसम्म लामखुट्टे पुगेको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रमा लामुखुट्टेले सार्ने रोगहरुको बढोत्तरी भएको छ ।
अज्ञात संसारको यात्रा
पृथ्वीमा कति प्रजातिका जीवजन्तु छन्, त्यसको अवस्था अज्ञात छ । हालसम्म करिब १२ लाख प्रजातिको मात्रै पहिचान गरिएको छ । लेखिका मेरी क्लेर एरियटका अनुसार, पृथ्वीमा अनुमानित ५ नो निलियन (३० वटा शून्य) ब्याक्टेरिया छन्, जुन यस ब्रह्माण्डमा भएका ताराहरूको संख्याभन्दा ज्यादा हो । पृथ्वीमा भएका ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजोवा लगायतका सूक्ष्म जीवाणुहरुको तौल संसारभरका सम्पूर्ण वनस्पति, जीवजन्तुको कुल तौलभन्दा बढी छ । मानिसको शरीरमा लगभग ४० हजार प्रजातिका ब्याक्टेरिया र १०० ट्रिलियन ब्याक्टेरियाका कोषहरू हुन्छन् । मान्छेको शरीरमा मानव कोषभन्दा बढी ब्याक्टेरियाका कोषहरु हुन्छन् ।
हाम्रो शरीरमा ती ब्याक्टेरिया विकासक्रमसँगै उत्पत्ति र विकासित भएका हुन्छन् र पारस्परिक रूपमा सहयोगी बन्दै जान्छन् । हाम्रो पाचनशक्तिदेखि ‘मुड’ को फेरबदल गर्नेसम्मका काम ती ब्याक्टेरियाले गर्छन् भने, मानवशरीरले तिनलाई गाँस र बास उपलब्ध गराउँछ । अन्य जीवजन्तुको जीवाणुसँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुन्छ । जब एक जनावरबाट त्यस्ता जीवाणुहरु अर्को नयाँ जनावर वा मानिसमा सर्छन्, तिनले रोग निम्त्याउँछन् । जस्तै— पोथी एनाफेलिस लामखुट्टेबाट मानिस लगायतका जनावरमा प्लाज्मोडियम जीवाणु सरेमा औलो रोग लाग्छ । सम्भवतः चमेरा, सालक, चिम्पान्जीबाट मानिसमा सरेका भाइरस लगायतका जीवाणुहरुले महामारी निम्त्याउँछन् । तर त्यस्ता असंख्य जीवाणुबारे हाम्रो ज्ञान निम्छरो छ । मानिसलाई संसारमा भएका करिब १ प्रतिशत वन्यजन्तु भाइरसबारे मात्रै थाहा छ । मानव अज्ञानताको यस्तो भयावह अवस्थाले समयसमयमा मानवजाति महाव्याधिको समीप पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय देखिएको कोभिड–१९ को अवस्था दुई महिनाभन्दा अघि अज्ञात थियो ।
नयाँ चुनौती, पुरानै तरिका
९० वर्षअघि अमेरिकामा सुगाज्वार बढेपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरले संक्रमण बढ्न नदिन सुगा आयातलाई प्रतिबन्ध लगाए । त्यसै गरी कोभिड–१९ को महामारीपछि चीनले वन्यजन्तुको ओसारपसार र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर यतिखेर अमेरिकामा ८३ लाख सुगा घरपालुवाका रहेको अनुमान गरिन्छ । जसरी अमेरिकी सुगा निर्यातको प्रतिबन्ध सीमित समयका लागि मात्रै रह्यो, सायद हालको वन्यजन्तु व्यापारमाथिको चिनियाँ प्रतिबन्ध पनि कोभिड–१९ को नियन्त्रणपछि त्यस्तै हुन सक्छ र हामी अर्को महामारी नहुँदासम्म पुरानै पारामा फर्किसकेका हुनेछौं । तर १९२९ को अमेरिकाको सीमितता र २०२० को विश्वको व्यापकतामा यतिखेर धरती–आकाशको फरक छ ।
कोभिड–१९ लगत्तै चीनले ‘लक डाउन’ गरेर नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि भूमण्डलीकृत विश्वमा कोभिड–१९ चीनबाट बाहिरिन कसैले रोक्न सकेन । मानिसले इतिहासमा विभिन्न महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड–१९ माथि ढिलोचाँडो विजय प्राप्त होला नै, तर त्यसको मूल्य निकै चर्को हुनेछ । त्यसैले कोभिड–१९ जस्ता दोहोरिरहने महाव्याधिहरुले ल्याउने संकटबाट मुक्त हुने एउटा उपाय प्रकृतिप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणमा फेरबदल हो । आशा गरौं, कोभिड–१९ ले हामीलाई बारम्बार सम्झाउनेछ— मानवजाति पनि प्रकृतिकै एक अंग भएकाले मान्छे स्वस्थ रहन पृथ्वीको स्वास्थ्य ठीक हुन जरुरी छ ।
श्रेष्ठ इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिफ्लिनरी स्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।
ट्वीटर : @uttambabu
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ २१:५३
‘जति धेरै परीक्षण, उति जोखिम कम’
चैत्र १०, २०७६ स्वरूप आचार्य, बुनु थारु
काठमाडौँ — काठमाडौंकी १९ वर्षीया एक युवतीलाई आइतबार कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएसँगै सरकारले हालसम्म गरेको रोकथामको पहल कति फितलो थियो भन्ने देखाएको छ । विज्ञहरूले धेरै अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमताले भ्याएसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।
हवाईमार्ग तथा स्थलमार्ग भएर नेपाल आउनेको संख्या धेरै रहेको भन्दै विज्ञहरूले सकेसम्म अधिक मात्रामा कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हालसम्म केवल ६१० जनाको मात्रै परीक्षण गरेको छ । जसमा चीनको वुहानबाट फर्किएका १७५ जनामा दुईपटक गरिएको परीक्षणलाई समेत गणना गरिएको छ ।
काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले सरकारले अब पनि धेरैभन्दा धेरै परीक्षणका लागि ढिलासुस्ती गरे त्यसको नतिजा भयावह हुने चेतावनी दिए । ‘हामीले केही समय अघिदेखि धेरै परीक्षण गर्नुपर्‍यो, परीक्षण गर्नेहरूको संख्या थोरै भयो भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले फ्रान्सबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण रहेको पुष्टि भयो । उहाँ त उदाहरण मात्रै हो । उहाँजस्तै धेरै जना संक्रमण देखिएका देशहरूबाट आउनुभएको छ । त्यसैले धेरैको परीक्षण गरेपछि मात्रै वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ ।’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको सरुवा रोग विशेषज्ञ, क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले दोस्रो कोरोना संक्रमित देखियो भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘उक्त बिरामी जथाभावी घुमेको छैन, क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसैले भयभीत भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयातित केस हो तर उनीसँग सम्पर्कमा आएकालाई भने सरकारले कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ । ट्र्याकिङमा ध्यान दिन सुरु गर्नुपर्छ । जति धेरै टेस्ट गर्‍यो, उति नै राम्रो हो ।’
उनले प्रयोगशालाले थोरै संख्यामा भए पनि परीक्षण गरेको र धेरैमा फैलिएको भए अन्यमा पनि देखिन्थ्यो होला भन्ने तर्क गरे । ‘समस्या नबने पनि बाहिरबाट आएकालाई निगरानी भने गर्नै पर्छ । अझै पनि इम्पोर्टेड केस आउने सम्भावना छ । त्यसैले निगरानी तथा परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अलि कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’
फ्रान्सबाट चैत ४ गते काठमाडौं आएकी युवतीमा संक्रमण रहेको पुष्टि भएपछि भने सरकारले लक्षण भएका जो कोहीको पनि परीक्षण गर्ने नीति लिएको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले दाबी गरेका छन् ।
यस्तै सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, ‘हामीले अब परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएर ६० वर्षमाथिका मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या रहेका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीहरूमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए तुरुन्तै परीक्षण गर्न भनेका छौं ।’
उनका अनुसार अब अस्पतालहरूले ज्वरो आएका बिरामीका लागि छुट्टै फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउने छन् र त्यहाँ जाँच गराउन पुगेका कसैमा शंका लागे आइसोलेसनमा राखेर उनीहरूबाट लिइएको नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्री ढकालले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने दाबी गरे पनि त्यसका लागि प्रयोगशालाको क्षमता कति हो र कुन स्तरको तयारी गरिएको छ भन्नेबारे तथ्यपरक उत्तर दिएनन् ।
गत बुधबार कान्तिपुरले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको राउन्ड टेबलमा बोल्दै प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाले प्रयोगशालाले कुनै पनि समयमा दैनिक ९०० जनासम्मको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
उनले अहिले प्रयोगशालाले पीसीआर विधिबाट मात्रै परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारले बनाएकै मापदण्डअनुसार मात्रै नमुनाहरूको संकलन गरेर परीक्षण गरिएको बताएकी थिइन् । यस्तै उनले अन्य परीक्षणका लागि प्रयोग भइरहेका उपकरण तथा जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा कोभिड–१९ को परीक्षणमा लगाए दैनिक १५ सय जनासम्मको परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला सक्षम रहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
परीक्षणलाई काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशको अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्नका लागि आफूहरू जुटेको र टेकुको प्रयोगशालाकै मापदण्डमा अन्यत्र पनि सञ्चालन गर्न सरकारले त्यहाँको मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको मन्त्री ढकालले दाबी गरेका छन् । यस्तै कोभिड–१९ को उपचारका लागि विशेष अस्पताल बनाउन जुटेको बताएका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिएसँगै अझै सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । ‘कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका सम्भावित बिरामीहरूको धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएका कसैलाई कोरोना परीक्षण नगरी छोड्नुभएन । जति धेरै परीक्षण गर्‍यो त्यति नै छिटो पत्ता लाग्छ र संक्रमण कम गर्न सकिन्छ ।’
उनले परीक्षण गर्दा संक्रमित भेटिए छिटो आइसोलेसनमा राखेर त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएकालाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने बताए । उनले कोरोना मात्रै नभएर इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लुको पनि परीक्षण गर्न जरुरी रहेको तर्क गरे । ‘कोरोना नेगेटिभ आयो भने पनि इन्फ्लुएन्जा टेस्ट गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि देखिएन तर लक्षण कडा छ र निमोनिया देखिएको छ भने थप टेस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बर्ड फ्लुको पनि टेस्ट हुनुपर्छ किनकि बर्ड फ्लु पनि खतरनाक हो । पोहोर साल पनि देखिएका थिए धेरै बिरामी ।’
उनले काठमाडौंमा मात्र परीक्षण सीमित राख्न नहुने पनि बताए । ‘काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी, लहान, जनकपुर, वीरगन्ज, महेन्द्रनगर, धनगढी आदि जोखिमयुक्त ठाउँ छन् । मैले आँकडा हेर्दा यहाँ पनि धेरै चहलपहल हुन्छ । यी ठाउँबाट पनि नमुना संकलन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भुसको आगो जस्तै भएको पनि हुन सक्छ । भुसको थुप्रोमा आगो लगाइदियो भने बाहिर धूवाँ पनि देखिँदैन तर भित्र कोट्याएर हेर्दा खरानी भइसकेको हुन्छ । त्यस्तो स्थिति हुन नदिन सर्भिलेन्स साइट बढाउनुपर्छ ।’
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘२ देखि ३ महिना बेकारमा समय खेर फालिएको छ । धरान, हेटौंडा, चितवन, पोखरा, नेपालगन्जतिर पनि किट राखिदिने हो भने धेरै परीक्षण हुन सक्छ ।’
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ २१:३९